အမျိုးသားဥယျာဉ်၌တောင်တက်နေစဉ်ခရီးသွားတစ် ဦး သည်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း၊ ဆာလောင်မွတ်သိပ်သောဝက်ဝံတစ်ကောင်ကိုက်ခံရခြင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » Breaking ခရီးသွားသတင်းများ » အမျိုးသားဥယျာဉ်၌တောင်တက်နေစဉ်ခရီးသွားတစ် ဦး သည်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း၊ ဆာလောင်မွတ်သိပ်သောဝက်ဝံတစ်ကောင်ကိုက်ခံရခြင်း
ဥရောပသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • သတင်း • ရုရှားအထူးသတင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • ယခုခေတ်စား • သတင်းမျိုးစုံ
Ergaki အမျိုးသားဥယျာဉ်သည် COVID ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းခရီးသွားစဉ်လှပသောသဘာဝ၊ ရှုခင်းများကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်လူမှုရေးအကွာအဝေးကိုလေ့လာလိုသူများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာဖြစ်သည်။ ဆာလောင်နေသောဝက်ဝံတစ် ဦး အတွက်ညစာစားခြင်းသည်ဤခရီးကိုသေစေ။ ကျန်ရစ်သူတောင်တက်သမား ၃ ဦး အတွက်အသက်ရှင်သောငရဲတစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းသွားသည်။
ဧည့်သည်များသည်ခြေဗလာဖြင့်လမ်းလျှောက်ကာ ၇ နာရီကြာရှင်သန်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်
eTurboNews ၏စာရင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အန္တရာယ်အရှိဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ်များဆိုက်ဘေးရီးယားအမျိုးသားဥယျာဉ်ဖြစ်သော Ergaki Nature Park တွင်မော်စကိုမှခြေလျင်ခရီးသွားဧည့်သည်တစ်စုနှင့်ဘာမျှနီးစပ်မှုမရှိနိုင်ပါ။
Ergaki သည်ရုရှားနိုင်ငံ၊ Siberia တောင်ပိုင်း၊ Western Sayan တောင်တန်းများတွင်တည်ရှိသည်။ အမြင့်ဆုံးအမှတ်သည်အထွတ်အထိပ် Zvyozdniy ဖြစ်သည်။ Ergaki သဘာဝဥယျာဉ်သည်တောင်တန်းများပါ ၀ င်သောအကာအကွယ်နယ်မြေဖြစ်သည်။
ဒီဆိုက်ဘေးရီးယားအမျိုးသားဥယျာဉ်မှာသူ့တဲကိုဖြည်နေတဲ့မော်စကိုကရုရှားသူရဲကောင်းတစ် ဦး ဟာအညိုရောင်ဝက်ဝံတစ်ကောင်နဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေထိတ်လန့်တကြားကြည့်နေတယ်။
ဒီဆာလောင်တဲ့အညိုရောင်ဝက်ဝံကိုစားခဲ့တဲ့ခရီးသွားကိုအသက် ၄၂ နှစ်အရွယ် Yevgeny Starkov လို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
သူသည်မော်စကိုမှအခြားခရီးသွားအုပ်စုတစ်စုနှင့်ခရီးလှည့်လည်ခဲ့ပြီးရုရှားအလယ်ပိုင်း Krasnoyarsk ရှိနာမည်ကျော် Ergaki အမျိုးသားဥယျာဉ်၌ခြေကျင်လမ်းလျှောက်ခဲ့သည်။
အုပ်စုတစ်ခုတည်း၌တောင်တက်သမားသုံး ဦး သည်ဖိနပ်မစီးဘဲထွက်ပြေးနိုင်သည်။ သူတို့ကအကူအညီတောင်းဖို့တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နဲ့သေစေလောက်တဲ့ဝက်ဝံတွေလိုက်ဖမ်းရင်းခြေဗလာနဲ့ခုနစ်နာရီကြာခြေကျင်ခရီးကိုသွားခဲ့တယ်။
Ergaki သဘာဝဥယျာဉ်သည်ခမ်းနားထည်ဝါသော Wester Sayan တောင်များ၏အလယ်၌တည်ရှိပြီးပြိုင်ဘက်ကင်းသောတောင်တန်းရှုခင်းများနှင့်ပြည့်စုံသည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောဧည့်သည်များသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝကိုကြည့်ရန်၊ ပန်းများပြည့်နေသောကောင်းကင်များနှင့်ချိုင့်ဝှမ်းရှိကြည်လင်သောရေကန်များကိုအံ့သြဖွယ်ကြည့်ရှုရန်၊ အထွတ်အထိပ်နေရာများ၊ အံ့မခန်းရော့ခ်ပုံစံများနှင့်သာယာသောမြင်ကွင်းများကိုခံစားကြသည်။
မတူညီသောရှုခင်းများကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောနေရာတွင်ထည့်သွင်းထားသော Ergaki သဘာဝဥယျာဉ်သည်တောင်တက်ခြင်း၊ ခြေလျင်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ခြင်းနှင့်တောင်လျှောစီးခြင်းတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတစ် ဦး ကဝက်ဝံသည်၎င်းတို့အားတွေ့ပြီးနောက်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူအစာမစားခင်တောထဲသို့ထပ်မံထွက်ပြေးသွားသည်ကိုဒေသခံသတင်းဌာနတစ်ခုအားပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားဂေဟဗေဒ ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်ပန်းခြံစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကထိုတိရစ္ဆာန်အားဖမ်းပြီးသတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ရပ်၏အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။
dolores Ruggiero ဖြစ်သည် says:
1:2021 မှာသြဂုတ်လ 17, 11
ဘယ်သူမှသေနတ်မရှိဘူး ????? လက်နက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?????